မီးဖွားပြီးသွေးသွန်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ကလေးမီးဖွားပြီး (၂၄)နာရီအတွင်းတွင် သွေးပမာဏ(၅၀ဝ) သို့မဟုတ် (၁၀ဝ၀) မီလီလီတာထက် ပို၍သွေးသွန်ပါက မီးဖွားပြီးသွေးသွန်ခြင်း (Postpartum bleeding or postpartum hemorrhage PPH) ဟုခေါ်သည်။ အချို့အဆိုအရ မီးဖွားပြီးသွေးသွန်ခြင်းဟု သတ်မှတ်ရန် သွေးပမာဏနည်းသွားသည့်ရောဂါလက္ခဏာများလိုအပ်သည်။ ကနဦးဖြစ်ပေါ်တတ်သော ရောဂါလက္ခဏာများမှာ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ မတ်တတ်ရပ်လိုက်သည့်အခါ မူးဝေခြင်းနှင့် အသက်ရှူမြန်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သွေးပိုဆုံးရှုံးလာသည်နှင့်အမျှ ချမ်းလာခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းခြင်း၊ ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် သတိလစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ ကလေးမီးဖွားပြီးချိန်မှစ၍ နောက်(၆)လအထိ မီးဖွားပြီးသွေးသွန်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အများဆုံးဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည့်အကြောင်းရင်းမှာ ကလေးမီးဖွားပြီး သားအိမ်ညှစ်အားမကောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားအကြောင်းရင်းများမှာ အချင်း အကုန်မဆင်းခြင်း၊ သားအိမ်စုတ်ပြဲသွားခြင်းနှင့် သွေးခဲမှုအားနည်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ မီးဖွားပြီးသွေးသွန်ခြင်းသည် သွေးနီဥပမာဏနည်းပါးသော အာရှလူမျိုးများ၊ ပုံမှန်ထက်ကြီးသော ကလေးမွေးသူများ၊ ကလေးတစ်ယောက်နှင့်အထက် မွေးသူများ၊ အဝလွန်သူများနှင့် အသက်(၄၀)နှင့်အထက် ကလေးမွေးသူများတွင် အဖြစ်များသည်။ ဗိုက်ခွဲ၍မီးဖွားသူများ၊ မီးဖွားရန်အတွက် ဆေးသွင်းထားသောသူများနှင့် မိန်းမကိုယ်ကို ညှပ်၍ မွေးလမ်းကြောင်းချဲ့ထားခြင်း(episiotomy)ခံရသူများတွင်လည်း ဖြစ်တတ်သည်။
အထက်ပါအန္တရာယ်သင့်စေနိုင်သောအချက်များကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးဖွားပြီးပြီးချင်း အောက်စီတိုစင်(oxytocin)ဆေးပေး၍ သားအိမ်ညှစ်အားကောင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မီးဖွားပြီးသွေးသွန်ခြင်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်သည်။ ဆေးပစ္စည်းရှားပါးသောနေရာများတွင် အောက်စီတိုစင်ဆေးအစား မီဆိုပရော့စ်တော(Misoprostol)ဆေးကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ မီးဖွားပြီးသွေးသွန်ခြင်းကို ကုသရာတွင် အကြောဆေးသွင်းပေးခြင်း၊ သွေးသွင်းပေးခြင်းနှင့် အာဂိုတမင်း(ergotamine)ဆေးပေး၍ သားအိမ်ညှစ်အားကောင်းစေခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဤနည်းလမ်းများဖြင့် ကုသ၍မရပါက သားအိမ်ကို လက်ဖြင့်ဖိနှိပ်ပေးနိုင်သည်။ ဝမ်းဗိုက်ကို ဖိပေးခြင်းဖြင့် အေအော်တာ (aorta) သွေးကြောမကြီးကိုပါ ဖိမိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ အကြံပေးချက်မှာ အခြားသောကုသနည်းများ မလုပ်ပေးနိုင်ခင်အချိန်တွင် လေမပါသော ရှော့ဒဏ်ခံနိုင်သည့် အဝတ်အထည်(non-pneumatic anti-shock garment)ကို ဝတ်ထားပေးရန်ဖြစ်သည်။
ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် မီးဖွားသူများ၏ (၁.၂) ရာခိုင်နှုန်းတွင် မီးဖွားပြီးသွေးသွန်ခြင်းဖြစ်တတ်ပြီး မီးဖွားပြီးသွေးသွန်ခြင်းဖြစ်ပွားသူများ၏ (၃)ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ကမ္ဘာနှင့်တဝှမ်းတွင် မီးဖွားပြီးသွေးသွန်ခြင်းကြောင့် လူပေါင်း(၄၄၀ဝ၀)မှ (၈၆၀ဝ၀)အထိ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူများကို အသက်ဆုံးရှုံးစေသော အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် မီးဖွားပြီးသွေးသွန်ခြင်းကြောင့် မီးဖွားပြီးအမျိုးသမီးပေါင်းတစ်သိန်းတွင် (ဝ.၄)ယောက်ခန့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ဆဟာရသဲကန္တာရတောင်ပိုင်းရှိ အာဖရိကနိုင်ငံများတွင် အမျိုးသမီးပေါင်းတစ်သိန်းတွင် (၁၅၀) ယောက်ခန့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် (၁၈၀ဝ)နောက်ပိုင်းနှစ်များ၌ သေဆုံးမှုနှုန်း အတော်လျော့ပါးလာခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ "The prevention and treatment of postpartum haemorrhage: what do we know, and where do we go to next?" (January 2015). BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology 122 (2): 202–10. doi:10.1111/1471-0528.13098. PMID 25289730.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Gibbs၊ Ronald S (2008)။ Danforth's obstetrics and gynecology (10th ed. ed.)။ Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins။ p. 453။ ISBN 9780781769372။ CS1 maint: extra text (link)
↑ ၃.၀ ၃.၁ Lynch၊ Christopher B- (2006)။ A textbook of postpartum hemorrhage :acomprehensive guide to evaluation, management and surgical intervention။ Duncow: Sapiens Publishing။ pp. 14–15။ ISBN 9780955228230။
↑ "Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013:asystematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013." (17 December 2014). Lancet 385 (9963): 117–71. doi:10.1016/S0140-6736(14)61682-2. PMID 25530442.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မီးဖွားပြီးသွေးသွန်ခြင်း&oldid=320825" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ ဇွန် ၂၀၁၆၊ ၀၆:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။